आफ्नो जन्मदिनमा नायक आकाश श्रेष्ठले सियोनाको उपचारको लागि सहयोग गरे यति धेरै रकम ! – AB Sansar
आफ्नो जन्मदिनमा नायक आकाश श्रेष्ठले सियोनाको उपचारको लागि सहयोग गरे यति धेरै रकम !
November 7, 2020 November 7, 2020 adminLeaveaComment on आफ्नो जन्मदिनमा नायक आकाश श्रेष्ठले सियोनाको उपचारको लागि सहयोग गरे यति धेरै रकम !
काठमाडौं । अभिनेता आकाश श्रेष्ठले १३ महिनाकी बालिका सियोना श्रेष्ठको उपचारका लागि १ लाख १७ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेका छन् । ‘पूजा आकाश फ्यान क्लब’का सदस्यहरूले संकलन गरेको यो रकम अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठले सियोनाको अभिभावकलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । सियोनाको उपचारका लागि २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
प्रशंसकहरूले अभिनेता आकाश श्रेष्ठको जन्मदिनको अवसरमा विशेष कार्यक्रम काठमाडौंमा आयोजना गरे । सोही कार्यक्रममा उनीहरूले आकाशलाई केक काट्न लगाएर विभिन्न उपहार प्रदान गर्दै यी अभिनेताको जन्म दिन मनाए । सो क्रममा यी अभिनेतालाई प्रशंसकहरूले एक तोलाको सुनको सिक्री पनि लगाइदिए ।
सोही कार्यक्रममा प्रशंसकहरूले बेबारिसे लास व्यवस्थापनका लागि पूजा र आकाशमार्फत पवित्रा लामालाई ४५ हजार रुपैयाँ पनि सहयोग प्रदान गरे । सो क्रममा सबै प्रशंसकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दा अभिनेता आकाश भावुक भएका थिए । भव्यसँग आफ्नो जन्मदिन मनाइदिएकोमा उनले धन्यवाद ज्ञापन पनि गरे । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
ICU मा भर्ना भएका मनोज गजुरेलले भावुक हुँदै अस्पतालको बेड बाटै लेखे यस्तो स्टाटस !
राष्ट्रपति विजेता बाइडन: जसको चुनाव जितेपछि शपथ लिने तयारी गर्दै गर्दा कार दु’र्घ’ट’नामा उनको पत्नी नेलिया र छोरीको गयो ज्या:न
कोभिड र रुघाखोकी यसरी छुट्याउनुस् : डा. शेरबहादुर पुनको सल्लाह
May 8, 2021 May 8, 2021 santosh
एकाबिहान मर्निङ वाकमा आएका ब्यक्ति मृ’त भेटिए ,को हुन यी युवक ?